अपाङ्ग दिनेशको दैनिकि एक खुट्टाकै भरमा रिक्सा – Bihani Online
२ माघ २०७३ ११:१८ January 15, 2017 bihani
कपिलवस्तु , माघ २ – “भन्छन दैवले जे लेख्यो त्यो भएरै छाड्छ भनेर “ सदाझैं यस वर्ष पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेर अपाङग दिवस मनाए । वास्तविक तथ्याङकको अभाव भए तापनि विश्वमा हाल कुल जनसङ्ख्याको स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरूले १० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत कुनै न कुनै किसिमको अपाङगताबाट पीडित रहेको तथ्याङक बाहिर आएको छ ।
यो दिवस पनि अन्य दिवस जस्तै सोही दिन मात्रै सीमित हुने गरेकोे छ । तर वास्तविक अपाङ्गलाई हेर्ने कोहि हुँदैन । अपाङ्गको हकमा बोल्ने विभिन्न संघ संस्था लाई भाषण गर्दैमा भ्याइ नभ्याइ छ ।कपिलवस्तुको शिवराज न.पा. ९ भलुहि बस्दै आउनु भएका दिनेश थारु पनि अपाङग हुनुहुन्छ । उहाँको खुट्टा सानो छोटो छ भने सजिलै संग बोल्न पनि सक्नु हुन्न । दैवले पनि सबै थोक एउटै लाई दिएर दुख माथि दुख थपिदिएको छ । बावा आमाको एक्लो छोरो,दाइ भाइले कमाउलान भन्नु छैन , बावा आमा बुढा बुढि भइसक्नु भयो ।
घरमा रहेकि एउटि बहिनि अनि बुढा भएका बा आमा कसरि पाल्ने , कसरि पढाउने भन्दै आसुँ झार्छन दिनेश । अपाङग भएर पनि आफनो खर्च धान्न रिक्सा चलाउँछन उनि । आमा खुसानि थारु र बाबु सुन्तन थारुको कोखबाट वि.सं. २०५५ सालमा जन्मिएका थारु जन्मजात अपाङ्ग भने होइनन, सानो छदा खुट्टामा घाउ भै समयमै उपचार गर्न नसक्दा उक्त घाउ बिग्रिएर आफ्नो खुट्टा संगै चिउडो सानो भएकोले बोल्न र हिड्न पनि अफ्ठ्यारो हुने उनले बताए ।
सायद आर्थिक अवस्था राम्रो र समयमै उपचार भएको भए आज यस्तो अवस्थामा आउने थिएन होला भन्दै उनले दुखेसो पोखे । उनको देब्रे खुट्टा छोटो मसिनो र कम्जोर रहेको छ भने दाइने खुट्टा ठिक अवस्थामै रहेको छ , त्यसैगरी चिउडोमा भएको समस्याले गर्दा पनि उनि बोल्न पनि अफ्ठ्यारो र गाह्रो मान्ने गर्दछन । हिड्दा लठ्ठीको साहारामा हिड्ने व्यक्ति कसरि त्यत्रो सामान लोड गरि रिक्सा चलाउन सकेको होलान भनि देख्ने जति सबै अचम्ममा पर्ने गर्दछन ।
सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यो बास्तबिक हो उनि आफु हिड्दा लट्ठिकै साहारामा हिड्छन भने रिक्सा चलाउदा देब्रे खुट्टाको हल्का आडमा दाहिने खुट्टाले आदि आदि पाईडल घुमाइ रिक्सा चलाउने गर्दछन । उनले सकि नसकि रिक्सा भरी सामान राखेर तानेको देख्दा जो कोहिको आखामा आँसु आउँछ । घर को आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदा र कुनै पनि संघ संस्थाले आफुलाई सहयोग नगर्दा उनले आफ्नो पढाई विचैमा छोड्नु प¥यो ।
हिड्दा लठ्ठीको साहारामा हिड्ने व्यक्ति कसरि त्यत्रो सामान लोड गरि रिक्सा चलाउन सकेको होलान भनि देख्ने जति सबै अचम्ममा पर्ने गर्दछन र सुन्दा अचम्म लाग्ने तर यो बास्तबिक हो उनि आफु हिड्दा लट्ठिकै साहारामा हिड्छन भने रिक्सा चलाउदा दाहिने खुट्टाको भरमा रिक्सा चलाउछ्न ।वास्तवमा अपाङग के हो कसरी हुन्छ र नेपालमा अपाङगहरूका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा नै मुख्य भएकोले यसैबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक छ ।
हाम्रो समाज पूर्णरूपमा सामाजिक रूढिवाद र धार्मिक नीतिनियमको आधारमा चलेको छ । यसै क्रममा अपाङग हुनु वा भएका व्यक्तिहरूलाई समाजमा दोस्रो दर्जाको मानिसको रूपमा लिइन्छ , दिनेशलाई पनि आफु अपाङ्ग हुँदा धेरै समस्या झेल्नु परेको उनि बताउँछन ।अपाङग लाई हरेक शुभ कार्यदेखि सामाजिक कार्यमा बन्देज लगाइन्छ । शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता त्यसमाथि समाजको अत्याचारले गर्दा उनीहरूलाई अशक्त बनाइदिन्छ ।
कोही पनि मानिस अपाङग हुन चाहंदैन तर अनेक प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटनाका कारण अपाङग बन्न पुग्छ । दिनेशको पनि बाल्यकाल निकै रमाईलो थियो , तर ७ , ८ वर्षकै उमेरमा उन्लाई विरामि भयो र उपचार गर्ने पैसा नहुँदा र जति दुःख देखाएपनि कसैले सहयोग नगर्दा उनि नचाहाँदा नचाहाँदै अपाङग बन्न पुगे । त्यसैले अपाङग पूर्वजन्मको पाप नभएर व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति तथा संस्कृतिको लापरवाही र आर्थिक स्थितिको नतिजा मात्र हो ।
अपाङग हुनुलाई पाप र कुकार्यसंग तुलना गर्नुभन्दा सपाङगहरू सरहको सच्चा व्यवहार गर्नु आजको आवश्यकता हो । विकासको नाममा भइरहेको विनाश तथा राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा अपाङग सङ्ख्या बढ्दो छ । अपाङगहरूको हकहितका लागि खोलिएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त अनुदान तथा सहयोगको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, तव मात्र दिनेश थारु जस्ता अपाङगता पाएका व्यक्तिहरुले राहत पाउँछन ।
यसरी अपाङगहरूको हकहितका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियरूपमा विविध प्रयासहरू भए तापनि ती कार्यक्रमहरूले वास्तविक अपाङगहरूको उद्धार हुन सकेको छैन । सरकारी नीति नियम अदालतीरूपमा मात्रै कार्यान्वयन हुने हुंदा सामाजिकरूपमा हुने विविध भेदभाव तथा छीःछीः र दुर्दुर्को भावनालाई स्वयं आफ्नै मनदेखि हटाउनु आवश्यक छ ।
जसले अपाङगहरूमा हुने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ।उनीहरूभित्र हुने आत्मग्लानि तथा अशक्त हुं भन्ने भाव जरैदेखि उखाल्नका लागि पनि अन्य व्यक्तिको सहयोग आवश्यक छ ।अपाङग लाई सपाङगको महसुस गराउनु हाम्रो कर्तव्यहो र यसका लागि सरकारी, सामाजिक तथा पारिवारिक सहयोग र सल्लाह भने नितान्त आवश्यक छ ।